Home - Muuqo
Muuqo waa shirkad talo bixin oo ku takhasustay suuqgeynta istiraatiijiyadeed, xidhiidhka bulshada iyo adeegyada warbaahinta si aanu kaaga caawino inaad la xiriirto macaamiishaada oo aad u kordhiso iibka badeecadahaaga ama adeegyadaada.
Waxaan ka caawinnaa ururada iyo ganacsiyada inay kor u qaadaan dakhligooda anagoo kobcinayna xidhiidh-wanaaga macaamiishooda. Si taas loo sameeyo, waxaan u adeegsaneynaa khibradeena, xog-uruurinta cilmiyaysan iyo tiknooloojiyo kala duwan.
Magac muujinta way ka mug weyntahay astaan ama xayeysiis kaliya. Astaan magac weyni waxay abuurtaa farqiga u dhexeeya shirkad la iloobey iyo mid kale oo leh taageerayaal daacada u ah oo jecel inay safka u soo galaan xarumeheeda si ugu adeegtaan.
Waxaan kaa caawinaynaa inaad abuurto aragti kugu quman oo sax ah oo macmiishaadu ka arkaan baraha bulshada. Waxaan u soo dhisnaa xogag hal-abuur ku salaysan, oo aanu ku baahinayno dhammaan mareenada ku habboon, si aad ugu dhowaato macaamiishaada.
Sheeko-abuuris heersare ah iyo xog soo jiidasho leh ayaa ka mid ah dhidibada suuq-geynta guusha leh. Anaga oo leh qaybta sawir-qaadista iyo qaybta soosaarida muuqaalada, waxaan awoodnaa inaan ganacsigaaga kor ugu soo qaadno, sida ugu waxtarka badan leh.
Boggaaga internet-ku waa foolka shirkadaada. Waxaan xeeldheeryaal ku nahay samaynta, maareynta iyo horumarinta website-yada, inaga oo aan danayneen quruxdiisa kaliya, laakin waxaan xoog saaraynaa xidiidh wanaaga iyo muujinta shirkadaada.
Waxaan bixinaa tababaro kala duwan oo jaadad badan leh oo loogu talagalay ururada iyo shirkadaha heerar walba leh. Waxaan kuu nahay danwadaage aad ku kalsoonaan kartid haddii aad u baahan tahay barnaamijka hal’abuurka ganacsi ee aasaasiga ah.
Graphical designWeb development
Fishery survey – IOM
MUUQO waa shirkad ku takhasustay suuqgeynta istiraatiijiyadeysan, xidhiddhka iyo adeegyada warbaahinta, kor u qaadida iibka iyo ka caawinta kobcin dhaqaalaha ganacsiyada.
Waxaan jeclaan lahayn inaanu kaa war helno. Si toos noogala soo xidhiidh taleefanka, emaylka, baraheena bulshada, ama adoo adeegsanaya foomka ”dib ii soo wac” ee hoosta ku yaal.
Copyright © 2021 Muuqo. All rights reserved.